Ahoana ny fomba hananganana tranonkala fifandraisana amin'ny e-commerce?
Ny fananganana tranokala dia fomba tsara indrindra ahafahan'ny olona mitondra fiara amin'ny tranokala ecommerce. Raha ny tanjonao voalohany dia ny hampitombo ny fivarotana amin'ny fiverenan'ny mpanjifa, ny fifandraisana amin'ny rohy dia tena ilainao. Ireto ambany ireto dia azonao jerena ny rindrambaiko fampiharana ecommerce vitsivitsy izay manao asa. Jereo amin'ny rehetra ary mifidiana izay tena mahaliana anao.
Strategy Outreach Strategy
Ny fomba mora ahazoana rohy dia ny fiasana amin'ny influencers. Ny fandaharan'asam-pandrenesana iray dia ny mamantatra ireo olona manan-danja afaka mamoaka votoaty mifanentana amin'ny mpihaino anao. Mifantoha amin'ny fananganana fifandraisana amin'ireo mpanaraka ny aterineto izay afaka mizara vaovao sy hevitra momba ny vokatrao na ny serivisinao. Raha toa ianao tsy mahatsiaro ny fanatontosanao ny tenanao, dia azonao atao foana ny manakarama tranokala na orinasa matihanina. Afaka miara-miasa amin'ny sehatra fitarihana iray koa ianao. Amin'ny ankapobeny, ny voka-pifidianana dia ahitana ireto lafiny manaraka ireto:
Ny fikarohana ireo mpitaona gripona;
Mifandray amin'ireo izay manana izany;
Manomana tolotra mampihetsi-po;
Miara-miasa amin'ny gripa izay manaiky ilay tolotra;
Mijery ny ROI amin'ny fanentanana vokatrao.
Mitandrema fa ny tanjonao dia araka ny tokony ho izy sy azo ekena. Ny fananana tanjona mazava sy mendrika dia manampy amin'ny fanombanana tsara ny fahombiazana na ny tsy fahombiazan'ny fanentanana fananganana ecommerce.
Mitandrema amin'ny famakafakana ny habaka
Ireo toerana fijerena matetika dia ambony noho ny Google. Afaka mitondra rohy maromaro ho an'ny tranokala ecommerce ianao ary hampitombo ny fitokisana sy ny tsy fivadihana amin'ny marikao. Amin'ny ankapobeny, misy karazana toeram-pijerena roa fototra:
tranokalan'ny votoatin'ny tranonkala (TechCrunch);
Ireo tranonkala famerenana avy amin'ny mpampiasa (Yelp, TripAdvisor).
Raha manandrana manangana tetikady ianao amin'ny fitazonana lisitry ny toeram-panadinana, dia manolotra soso-kevitra ireo manaraka ny dingana manaraka:
Mamorona lisitr'ireo valim-panadihadiana amin'ny mpampiasa te-hamotika ianao;
Fantaro raha efa voatanisa ny orinasa. Raha misy ny mombamomba anao ho an'ny orinasa iray, ataovy azo antoka fa hiteny ianao;
Zarao ny mombamomba ny media sosialy sy ny tranokalanao rehefa tonga izy ireo.
Tsarovy fa ny hevitra rehetra dia tokony ho marina. Aza miezaka manafina na mamafa fanamarihana ratsy - hetsika tahaka izany no hahatonga ny mpanjifany iray efa tsy sadaikatra tsotra izao. Amin'ny fanesorana ny fanehoan-kevitr'izy ireo dia asehonao fa tsy miraharaha ny fanehoan-kevitrao ianao. Raha tokony hanafoana ilay fanehoan-kevitra, dia miala tsiny sy mivoady ampahibemaso mba hanao tsaratsara kokoa.
Tsy tokony hohamaivanina ireo rohy anatiny mifandraika
Raha toa ka misy ifandraisany amin'ny fanorenana rohy ivelany ny fanambarana etsy ambony amin'ny alàlan'ny fananganana fifandraisana iraisam-po amin'ny influencers sy ny mpanjifa, Ny ezaka tsy tokony hohadinoina. Eritrereto ny fametrahana plugin iray izay maneho avy hatrany ny vokatra na ny serivisy mifandraika amin'ilay ilay mpampiasa efa eo. Ny fametrahana tranokala vokarin'ny vokatra amin'ny pejy Ecommerce dia hanampy amin'ny fanamafisana ny tahan'ny fihenam-bidy sy ny fotoana laniana amin'ny tranonkala rehefa mandinika ireo zavatra hafa ireo mpampiasa.
Ny fomba iray hafa ahitanao ny vokatra sy ny tolotra izay matetika novidina dia ny fampiasana ny data Google Analytics. Toy izao manaraka izao: rehefa fantatrao hoe inona matetika no nividianana ny zavatra, dia ho fantatrao ny zavatra tokony homena anao amin'ny manaraka.
Tsy misy mandà fa ny fifandraisana sy ny fiaraha-miasa amin'ny influencers ho an'ny fananganana trano fifandraisana ecommerce dia mitaky fotoana betsaka ary faharetana. Na izany aza, na ho ela na ho haingana dia hihena ny ezaka ataonao, ary hahita ny fivarotana elektronika ao amin'ny pejy voalohan'i Google ianao Source .